Showing posts sorted by date for query Android firmware. Sort by relevance Show all posts
Samsung SHV-E160L / K / S အတွက် version 4.1.2 Firmwares
Samsung SHV-E160L / K / S တို့အတွက် Firmware လိုအပ်လို့ တောင်းထားတဲ့ အကို တစ်ယောက် အတွက် ပြန်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ mediafire link လေးနဲ့ ဆိုတော့ Resume အတွက်လဲ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
အောက်ကလင့်တွေမှာ Download ရယူလိုက်ပါ။
SHV-E160K >>> http://www.mediafire.com/download/3bc6982m7e23dln/E160KKKJMC3+Android+4.1.2.rar
SHV-E160L >>> http://www.mediafire.com/download/xj258aw3179xh25/E160LKLJMA3+Android+4.1.2.rar
SHV-E160S >>> http://www.mediafire.com/download/xj2j0hf2229co47/E160SKSJMH2+Android+4.1.2.rar
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 24, 2015 No comments:
သည်တခါတော့ ကျွန်တော် လေ့လာ သိရှိ သလောက် နည်းပညာလေး တွေထဲက မိုဘိုင်း လောကမှာ ထိုးဖောက် ၀င်ရောက် လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Samaung ပြီးရင် Android Os စမတ်ဖုန်း ထဲမှာ ဒုတိယ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ OPPO ဖုန်းတွေကို ဘယ်လို ဖန်းဝဲလ် တင်ကြမယ်ဆို တဲ့ နည်းလမ်း လေးကိုဘဲ ရေးသား မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် Oppo ဖုန်း အသုံး ပြုသူများ အတွက် အထူး ရည်ရွယ်ကာ သည်နည်းလမ်း လေးကို ကျွန်တော် ရေးသား မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
OPPO စမတ်ဖုန်းများ ကတော့ အရင်က Normal Rom များနဲ့ မတူဘဲ ယခုအခါ မှာတော့ Color Os Rom များ ကို အသုံး ပြုလာ ကြပြီ ဖြစ်တာကိုတွေ့ ရပါမယ်။
(ဥပမာ --Find5စထွက် စဉ် က Normal rom ပါ၊ ယခု အခါ မှာတော့ Color Os အဖြစ် အရောင်းဆိုင် များမှာ ရှိနေတာကို တွေ့မြင် ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ) Color Os များမှာ များသော အားဖြင့် မြန်မာ (ဗမာ) ဘာသာ စကား ပါဝင် လာတာတွေ့ ရပါတယ်။
Color Os များ မှာ ထူးခြားတဲ့ Feature သစ် များစွာ ပါရှိလာပြီး သုံးရတာ သွက်လက် မြန်ဆန် လာတာမို့ OPPO သုံး သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့်
လက်ရှိ Normal Rom ဖြစ်ပါက Color Os Rom များသို့ update လုပ် သုံးသင့် ပါသည် ဆိုတာကို ဦးစွာ အကြံပြု လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်..
oppo ဖုန်းများဟာ rom / firmware များကို တခြား ဖုန်းတွေလို flash tool များနှင့် Computer မလိုဘဲ မိမိတို့ ဖုန်းထဲ မှာတင် update / install လုပ်လို့ ရတာမို့ လွယ်ကူ စေပြီး ပိုပြီး အဆင်ပြေ စေပါတယ်။
Update လုပ်မယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ဆောင် လိုက်ပါနော်...
သတိ ပြုသင့် တာလေးကို ပြောပါမယ် ၊၊ ၊၊ Color Os Rom မှ Version မြင့် Color Os Rom သို့ မြှင့်ပါက ပြသနာ မရှိသော်လည်း Normal Rom မှ Color Os Rom သို့ update လုပ်လျှင် တော့ဖြင့် storage ကို အလို အလျှောက် Format လုပ်မှာကြောင့် User data များ ပျက်ပါမည် (လိုအပ်လျှင် external SD မှာ backup လုပ်ထား သင့်ပါတယ်)
ဖုန်း model အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ rom များ ကို အောက် ဖော်ပြပါ ဆိုက်များမှ download လုပ်ပါ။
(oppo logo မှာ ရပ်နေပြီး firmware သေနေတဲ့ ဖုန်းများလဲ ဒီ အဆင့်များ အတိုင်း ပြုလုပ်နိင် ပါတယ်)
OPPO FIRMWARE Colour/ Normal တို့ကို အောက်ကလင့်တွေမှာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်။
▼ OPPO FIRMWARE DOWNLOAD ▼ And ▼ OPPO OS Colour / Normal ▼
ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ oppo official update Rom/firmware များကို download ယူဖို့ အကောင်းဆုံး website တခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ color OS Rom နဲ့ Normal Rom ကို၂ မျိုး ခွဲပေး ထားပါတယ်) ဒေါင်းမယ် ဆိုလည်း အရမ်း လွယ်ကူပါတယ်.. ဖန်ဝဲလ်ထဲက မိမိဖုန်း မော်ဒယ် လိုက် ဖန်ဝဲလ် ကို ကလစ်လိုက်ပါ အောက်နားမှာ ကျလာတဲ့ မိမိဖုန်း ဖန်ဝဲလ် Download ဆိုတာလေး ကလစ်တာနဲ့ OneClick Downlaod ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်... တကယ် လွယ်ကူ ပါတယ်..
မိမိတို့ ဒေါင်းလော့ ယူခဲ့သော Firmware Zip ဖိုင် ကို ဖုန်းရဲ့ SD card မှာ ကူးထား လိုက်ပါ။
နောက်ဖုန်း ပါဝါ ပိတ်ပါ၊ ဖုန်းရဲ့ ဘေး ဘယ်ညာတွင် ရှိသော (vol down+power button) အသံတိုးတဲ့ ခလုပ်နဲ့ ပါဝါ ခလုပ်ကို တွဲနှိပ်ပြီး Recovery mode ဝင်ပါ ..
Recovery mode ဝင်ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ရှိ မိမိ ဖုန်းဟာ Normal Rom ဆိုရင် vol အထက် အောက် ကီးနဲ့ ရွေ့ပြီး apply update from sdcard ကို power ခလုတ် ကို နှိပ် ရွေးချယ်ပါ။ ပြီးလျှင် sd ကဒ် အတွင်း ကူးယူ ခဲ့ပြီးသော firmware / rom... zip ဖိုင် ကို ရွေးချယ် install လုပ်ပါ...
Firmware update ကို စတင်ပြီး ၁ မိနစ် ခန့် အကြာ Auto Reboot နဲ့ ဖုန်းပြန် ပွင့်လာရင် Firmware update လုပ်ပြီးသော ဖုန်းတလုံးကို စတင် သုံးနိုင်ပါပြီ...
(Nomal မှ Color သို့ မြှင့်ပါက အချိန် အနည်းငယ် ကြာတတ် ပါတတ်ပါတယ်)
Color Os Rom မှ Update Color Os Rom သို့ version မြှင့်သုံး ပါက ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Recovery mode ရဲ့  Select Language မှာ English ကို ရွေး ခဲ့ပါ..
Install from sd မှ From sd သွားပြီး copy လုပ်ထား ခဲ့ပြီးသော firmware / rom...zip ဖိုင်ကို ရွေးချယ် install လုပ်ပါ...အောက်ကပုံလေးတွေ အတိုင်းပေါ့
မိမိတို့ Firmware update ကို စတင် Install လုပ်အပြီး ၁ မီးနစ် ခန့် အကြာ Power off နဲ့ Reboot လုပ်ဖို့ ပြောပါ လိမ့်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ အနေနဲ့ Reboot လုပ်ပါ။ ဖုန်းပိတ်ပြီး ပြန်ပွင့်လာရင် Color Os အဖြစ် Firmware update လုပ်ပြီးသော OPPO ဖုန်းတစ်လုံးကို တွေ့မြင်နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကဲ ... အားလုံး အဆင်ပြေ ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း နည်းပညာလေး တွေကို ဆက်လက် လေ့လာပြီး ပြန်လည် မျှ ဝေ နေပါမည် ...
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 20, 2015 22 comments:
ကဏ္ဍ Firmware, Oppo, ဖုန်းနည်းပညာ
Clock Work Mod Recovery အကြောင်း သိကောင်းစရာ
CWM အကြောင်း ရေးဖို့ စဉ်းစားတော့ ကျွန်တော် တော်တော် လက်တွန့်နေ ပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော်က Technician တစ်ယောက် မဟုတ် လို့ပါ။ CWM အကြောင်း ပြောလိုက်ရင် အဆင် မပြေဖြစ် ရတဲ့ ကျွန်တော့ အတွေ့ အကြုံတွေ ကြောင့် လဲ ပါပါတယ် နောက် တခုက CWM သုံးပြီး နောက်ပိုင်း အမှားတွေ လုပ်မိရင် ဖုန်း FirmWare တစ်ခုလုံး ပျက်သွားနိုင် တာတွေကြောင့် လဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တယောက် ယောက် အတွက် အကျိုးရှိ မလား ဆိုပြီး ရေးလိုက် ပါတယ်။
CWM – ClockWorkMod Recovery ဆိုတာက Phone တစ်လုံးကို System Level Manage လုပ်ဖို့ အလွန် အသုံး ဝင်တဲ့ နည်း တစ်ခုပါ။ ပုံမှန် အားဖြင့် Android ဖုန်းတိုင်းမှာ စပြီး ထုတ် လိုက်တုန်း ကတည်းက Recovery တစ်ခုက ပါပြီးသားပါ။ Stock Recovery လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ROM Update လုပ်တာလို လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Stock ROM မှာပါတဲ့ system level application တွေ function တွေ ကိုပြောင်းလဲ ချင်လာပြီ ဆိုရင် Stock Recovery နဲ့ မရတော့တာ များပါတယ် ဒါကြောင့် CWM ကို သုံးရတာပါ။ ယျေဘုယျ အားဖြင့်တော့ CWM သုံးဖို့ Bootloader Unlock And/Or Root လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
Android ဖုန်းတလုံးကို Boot စလုပ် ချိန်မှာ Normal, Bootloader And Recovery ဆိုပြီး သုံးမျိုး လုပ်နိုင် ပါတယ်။ Normal ကတော့ Phone ကို ပုံမှန် အတိုင်း ဖွင့်တာပါ။ Bootloader ဆိုတာတော့ PC ကနေပဲ Control လုပ်ရတဲ့ Recovery လိုFunction မျိုးပါပဲ အဲဒါ အတွက် Fastboot ဆိုတဲ့ Application လေးကို သုံးကြတယ်။ Recovery ကတော့ အထက်က ပြောထားတဲ့ Mood ပါ။
CWM install လုပ်မယ် ဆိုရင် ၂ နည်း ရှိပါတယ်။ ROM Manager လို Application မျိုးနဲ့ Android Phone ကနေတင်ပဲ Install လုပ်နိုင်သလို Bootloader ထဲဝင်ပြီးတော့ PC ကလဲ Install လုပ်နိုင် ပါတယ်။
ROM Manager ကို သုံးမယ် ဆိုရင် Internet Connection လိုတဲ့ အပြင် ဖုန်း Model အားလုံး အတွက်လဲ မရပါဘူး။ Huawei ဖုန်းတွေ အတွက် တော့ ဒုတိယ နည်းက ပို အသုံး ဝင်ပါတယ်။
Notice: မိမိစက်နဲ့ မကိုက်တဲ့ Recovery ကို Flash လုပ်မိရင် Recovery ကို ဝင်မရ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ကံကောင်း တာက အများ အားဖြင့်တော့ ဖုန်းကို ပုံမှန် သုံးလို့ ရသေး သလို Bootloader ကနေလဲ တခြား Recover ကို ပြန် Flash လုပ်နိုင် ပါသေးတယ်။
Bootloader သုံးပြီး Recovery ထည့်မယ် (Flash လုပ်မယ် ဆိုရင်) ပထမဆုံး FastBoot Tool ရှိရ ပါမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ့် Device အတွက် Recovery Image ရှိရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ Fastboot flash recovery recovery.img ဆိုတဲ့ Command ကို Command Line ကနေ Run ရမှာပါ။
အဲဒီ လုပ်ငန်း စဉ်ကို ကိုယ်တိုင် မလုပ်ချင် သူတွေ အတွက် Ready-Made လုပ်ထားတဲ့ Package လေးတွေ Download လုပ်နိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ package တွေ ထဲမှာ fastboot.exe, recovery.img နဲ့ Batch File လေး တခုပါ ပါတယ်။ Install လုပ်ဖို့ အတွက် Phone ကို Bootloader Mode နဲ့ ဝင်ပြီးတော့ USB ကြိုးတပ်ပြီး Batch File လေးကို run လိုက်ရုံ ပါပဲ။
Success ဖြစ်သွားရင် Phone ကို Reboot လုပ်ရ ပါမယ်။ ပုံမှန် သမားတွေ အတွက် ကိုတော့ Battery ဆွဲဖြုတ် ၅ စက္ကန့်စောင့် ပြန်တပ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။
Command Line သမားတွေ အတွက်တော့ Fastboot reboot ပေါ့။
reboot system now : ဖုန်းကို Reboot ပြန်လုပ်မှာပါ
apply update from sdcard :: သင့်ဖုန်းရဲ့ SD ထဲမှာ update.zip ကိုထည့်ပြီး ROM Update လုပ်နိုင်ပါတယ်။
wipe data/factory reset :: ဖုန်းကို မူလ အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် ထပ်ထည့် ထားတဲ့ app တွေ data တွေ setting တွေ အကုန် ဖျက်ပစ်ဖို့ပါ။
wipe cache partition :: cache ဖိုင်တွေကို ရှင်းထုတ်မှာပါ။
install zip from sdcard :: ဒါက Flashable Zip တွေ တနည်း အားဖြင့် System Application တွေကို Install လုပ်ဖို့ပါ။
backup and restore :: ဖုန်းကို Complete BackUp Restore လုပ်နိုင် ပါတယ်။
CWM ထဲက လုပ်တဲ့ Function တွေက အလွန် အရေးကြီးလို့ မိမိ နားမလည် တာကို လက်တည့် မစမ်းစေ ချင်ပါဘူး။ ကိုယ် ဘာလုပ်နေ လဲဆိုတာ ကိုယ်သိဖို့ လိုပြီး တခုခု အမှား အယွင်း ဖြစ်ရင် ကိုယ်တိုင်ရဲ့ တာဝန် သာဖြစ် တယ် ဆိုတာ လေးတော့ ကြို သတိပေး ပါရစေ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 04, 2015 No comments:
ဖုန်း Brands အားလုံး အတွက် Official Firmware များကို တစ်နေရာ တည်း ရယူနိုင်
ကျနော် ဒီပိုစ့် လေးကို ရေးပေး ချင်နေ ခဲ့တာ ကြပါပြီ ဖုန်းကလိ သူများနဲ့ ဖုန်း Service သမားတွေ အတွက် တကယ် လိုအပ်မယ် ထင်လို့ အားလုံး အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း Huawei ဆိုင်ရာ Firmware တွေကို လိုက်ရှာရင်း တွေ့မိ တာလေးပါ အကောင့် အသစ် တစ်ခု ဖွင့်ပြီး ဒေါင်းလော့ ရယူ ကြည့်တော့
အရမ်း အဆင်ပြေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ လိုင်း အသင့်အတင့် လေးကောင်း ရုံနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Firmware Rom လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတစ်လော တုန်း ကလည်း ကျနော် www.sammobile.com မှာ အကောင့် တစ်ခု အလွယ်တကူ ဖွင့်ယူပြီး Samsung Official ရဲ့ Firmware အားလုံးကို
လိုသလောက် ဒေါင်းလော့ ယူနိုင်ပါပြီ ဆိုပြီး တင်ပေး ထားခဲ့ ဖူးပါတယ်။
တကယ်လို့ Samsung Firmware Rom အတွက် သီးသန့် ဖြစ်ချင် ရင်တော့ Official ချပေးနေ သမျှ Rom များကို အကုန် ရယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့
www.sammobile.com မှာ အကောင့် တစ်ခု ဖွင့်နည်းနဲ့ ဒေါင်းလော့ ရယူနည်းကို အောက်ကလင့်မှာ ၀င်လေ့လာ ကြည့်လိုက်ပါ။
အကောင့် တစ်ခု အလွယ်တကူ ဖွင့်ယူပြီး Samsung Official ရဲ့ Firmware အားလုံးကို လိုသလောက် ဒေါင်းယူနိုင်
အခုကျနော် တစ်ဆင့်ပြန်လည် မျှဝေသွားမှာ ကတော့ http://www.needrom.com မှာ အကောင့် အသစ် တစ်ခု ဖွင့်ပြီး ဖုန်း Brands အားလုံး အတွက်
Official Firmware များကို တစ်နေရာတည်း ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင့်မယ် နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာ ကြည့်လိုက်ပါ။
www.needrom.com မှာ အကောင့် တစ်ခု အလွယ် ဖွင့်နည်း
အရမ်း လွယ်ပါတယ် ခင်ဗျား လိုင်း အသင့်အတင့် ကောင်းနေရင် အကောင့် ဖွင့်ခြင်း ကိစ္စ စတင်လို့ ရပါပြီ။
၁။ ပထမဆုံး သင့်မှာ Gmail account တစ်ခုတော့ ရှိထား ရပါမယ်။ ပြီးရင် အကောင့် ဖွင့်ရန် အတွက် http://www.needrom.com ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ အကောင့် အသစ် တစ်ခုဖွင့်ရန် အတွက် အောက်က ပုံအတိုင်း Register ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ်ပါ
၃။ Register ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးလို့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာခဲ့ ရင်တော့ အကောင့် အသစ်ဖွင့် ဖို့ရန် Register Option ရဲ့အောက်မှာ
Username: နေရာမှာ မိမိ အသုံးပြု လိုတဲ့ နာမည် တစ်ခုခုကို ရေးပါ။
Email: နေရာမှာ မိမိ အသုံးပြု နေတဲ့ (သို့) အသုံးပြု လိုတဲ့ Gmail ကို ထည့်ပေး လိုက်ပါ။
Type the two words: ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အပေါ်က ပေးထားတဲ့ စာလုံးတွေကို အမှန်ရိုက် ထည့်ပေး လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးရင်တော့ Create Account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ Create Account အောင်မြင် ရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေပါ လိမ့်မယ်။ Login ရဲ့အောက် Check your email for your new passoword
ဆိုတာ ပြနေ ပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါက မိမိ အကောင့် အသစ်ဖွင့် လိုက်တာကို Verify ဖြစ်ဖို့ရန် အတွက် Gmail ကို စစ်ဆေး ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Username နဲ့ Password နေရာမှာ အသစ် ဖွင့်ထားတဲ့ နာမည်နဲ့ Password ကို မထည့်ပေး သေးပဲ ဒီအတိုင်း ခန ထားလိုက်ပါ၊ အရင် ဦးဆုံး Gmail ကို စစ်ဆေးဖို့ရန် အတွက် မိမိ Gmail ကို သွားလိုက်ပါ၊
၅။ Gmail သို့ရောက်တဲ့ အခါ Inbox ထဲမှာ Register တင်တုန်းက ထည့်ပေး ထားခဲ့တဲ့ နာမည်နဲ့ Password ကို Needrom Official ကပို့ပေး ထားပါ လိမ့်မယ် တန်းပို့ပေး ပါတယ်။
Official ကပို့ပေး လားတဲ့ Password က ယာယီ အနေဖြင့် အသုံးပြု ရန်သာ ဖြစ်ပါတယ် Password ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးထား ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
You can change the password in My Dashboard>User Options>Edit profile နေရာကို သွားပြီး ပြောင်းယူနိုင် တယ် ဆိုတာကို ပြပေးနေ ပါလိမ့်မယ်။
အခု Official ကပေး ထားတဲ့ Password ကို မှတ်ထားပါ သို့တည်းမဟုတ် Gmail ကို မပိတ်သေးပဲ ဒီ အတိုင်း ဖွင့်ထား လိုက်ပါ။
၆။ စောနားက Login Option ရဲ့အောက်မှာ Username: နေရာမှာ မိမိ အသစ်ဖွင့် ထားတဲ့ နာမည်ကို ထည့်ပေးပါ။
Password: နေရာမှာတော့ Official က ပို့ပေး ထားတဲ့ Gmail မှ Password ကို ထည့်ပေး လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ Login ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၇။ Login ၀င်ပြီးရင်တေ့ အောင်မြင်စွာ နဲ့ပဲ www.needrom.com မှာ အကောင့် တစ်ခု ဖွင့်ပြီး ပါပြီ။ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
၈။ ဒီတစ်ခါ Official ကပေးထားတဲ့ Password ကို ပြောင်းလိုက My Dashboard ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။
၉။ My Dashboard ကို နှိပ်လိုက် ပြီးရင်တော့ User Option ရဲ့အောက် Edit profile ဆိုတာကို တစ်ချက် ထပ်နှိပ် လိုက်ပါ။
၁၀။ Profile စာမျက်နှာကို ရောက်ရင်တော့ Username: နေရာ မှာတော့ မိမိ အသစ်ဖွင့် ထားတဲ့ နာမည် ပေါ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
First Name: နေရာမှာတော့ အသစ် ဖွင့်ထားတဲ့ နာမည်ရဲ့ ရှေ့က စာလုံးကို ထည့်ပေးပါ။
Last Name: နေရာမှာတော့ အသစ်ဖွင့် ထားတဲ့ နာမည်ရဲ့ နောက်ဆုံး စာလုံးကို ထည့်ပေး လိုက်ပါ။ အောက်က ပုံကို အသေ အချာ ကြည့်ပါ။
Display Name: နေရာ မှာတော့ ဘာမှ ထပ်လုပ်ပေး စရာမ လိုတော့ပါ။
Email: နေရာမှာတော့ အကောင့် သစ်ကို Register တင်တုန်းက ထည့်ပေး ထားတဲ့ Gmail အသင့် အနေထား ရောက်နေ ပါလိမ့်မယ် ဘာမှ ထပ်လုပ်ပေး စရာမလိုပါ။
New Password: နေရာ မှာတော့ မိမိ ပြောင်း သုံးလိုတဲ့ အသစ် Password တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
Password again: နေရာမှာတော့ စောနားက New Password မှာထည့်ထား ခဲ့တာကို ပြန်ထည့် ပေးလိုက်ပါ။
Upload Avatar: နေရာမှာ မိမိ အကောင့်မှာ ပုံလေးနဲ့ ထားသုံး ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Browse ဆိုတာကို နှိပ်သွား လိုက်ပြီး ကွန်ပျူတာမှ ပုံ တစ်ပုံကို ရွေးပေး လိုက်ပါ။
မိမိရဲ့ Profile နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Save Change & Verify Account စသည်ဖြင့် အောက်ဆုံးက စာတန်းကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
အရမ်းလွယ် ပါတယ် အားလုံးပဲ လုပ်တတ် ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
၁၁။ ဒီတစ်ခါ အကောင့် အသစ်လည်း Register လုပ်လို့ အောင်မြင်ပြီ Password ကိုလည်း မိမိ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ ပြီးပြီဆို ရင်တော့ မိမိ လိုချင်တဲ့
Firmware များကို ဒေါင်းလော့ ယူနည်းကို စကြ ရအောင်ပါ။
၁၂။ Menu Bar နေရာမှာ Home ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ၊
၁၃။ Home ကို နှိပ်လိုက် ပြီးရင်တော့ www.needrom.com မှာ အကောင့် အသစ် တစ်ခုဖြင့် မိမိ လိုအပ်တဲ့ Firmware များရဲ့ ဖုန်း Brands အားလုံး ကို အောက်က ပုံအတိုင်း မြင်နေရ ပါလိမ့်မယ်။
အခုမြင်နေ ရတဲ့ ပုံအတိုင်း ဆိုရင် ဖုန်း Brands က မစုံသေးဖူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဒီပုံက ကျနော် ဖြတ်ယူပြ ထားတာလေးပါ ဖုန်းအားလုံး အတွက် အစုံ ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ မိမိ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဖုန်း Brands ရဲ့ Logo လေးကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ၊ ကျနော်ကတော့ Huawei အတွက် လိုအပ်နေ တာမို့ Huawei ရဲ့
Logo လေးကို နှိပ်လိုက် ပါတယ်။
၁၄။ Huawei ရဲ့ Logo လေးကို နှိပ်လိုက် ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံလေးကိုသာ ကြည့်ပါ ပါးစပ် အဟောင်းသားလေး ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီဆိုဒ်မှာ Huawei Firmware Rom အတွက် List လုပ်ပေးထားတာ (575) Rom တောင် ရှိတယ် ဆိုပဲဗျာ။ ဒီအထဲ မှာတော့ သင့် အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Firmware လေးတော့ ရှိကောင်း ရှိနေမှာပါ၊ ကျနော့် အတွက်ကတော့ Ascend Mate7ပဲ လိုအပ်နေ တာမို့ Asend Mate7ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက်ပါတယ်။
၁၅။ မိမိ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ Logo လေးကို နှိပ်လိုက် ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ အခု မိမိဒေါင်းလော့ ရယူမယ့်
Firmware ရဲ့အမျိုးအစား ကတော့ Custom ဖြစ်ကြောင်း။ ပြီးတော့ Title: Ascend Mate & MT7-Uloo FIUI ဖြစ်ကြောင်း၊ Rom Version: အနေဖြင့် Rom Android Version 4.4.4 ဖြစ်ကြောင်း၊ Links: ကဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်တဲ့ လင့်က သုံးခုတောင် ချပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းလော့ရယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ လင့်သုံးခု အနက် တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၁၆။ မိမိမှာ လိုင်း အသင့် အတင့် သာ ကောင်းနေ ရင်တော့ ဒေါင်းလော့ လင့်လေးကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက်တာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း တန်းပြီး ကျလာ ပါလိမ့်မယ်။
Download File Info ထဲမှာတော့ Firmware ရဲ့ File Size က ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာကို အတိအကျ ပြပေး ထားပါတယ်၊
URL: နေရာမှာတော့ ဒီ Firmware ကို ဘယ်နေရာ ကနေ ရယူ လာတယ် ဆိုတာကို ပြပေးနေ ပါလိမ့်မယ်။ Connection လေးကောင်း နေရင်တော့
သင့်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဘယ် Firmware ကိုမဆို Start Download ဆိုတာကိုသာ အားရပါးရ နှိပ်ပြီး www.needrom.com မှ Official ရဲ့ Firmware တွေကို
မိမိ လိုအပ်သလောက် စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင် ပါပြီခင်ဗျား...။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 30, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Phone Application, လမ်းညွှန်